बलिउड सेलिब्रेटीका अंगरक्षकको तलब ? - बलिउड - साप्ताहिक
बलिउड सेलिब्रेटीका अंगरक्षकको तलब ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी
हलिउडपछिको सबैभन्दा ठूलो सिने उद्योग बलिउड । एउटा मात्र चलचित्र चल्यो भने यहाँ व्यक्तिको कायापलट नै हुन्छ । बलिउडका हरेक कलाकारले आफ्नो स्टारडम जोगाउन निकै मेहनत गरेको पाइन्छ । सधैं मिडियाको नजरमा रहने बलिउडका सेलिब्रेटीहरूको हरेक कुरा मिडियाका लागि ‘मसला’बन्छन् । वार्षिक १ हजारभन्दा बढी चलचित्र निर्माण हुने भारतको बलिउडले स्थापनाको १ सय वर्ष मनाइसकेको छ ।
सुरक्षा थ्रेटका कारण बलिउड कलाकारहरू कहीं जानुपर्दा आफ्ना बडीगार्डलाई सँगै लिएर जान्छन् । एउटा चलचित्रमा काम गरेबापत ३० करोडभन्दा बढी लिने बलिउड अभिनेताहरूले बडीगार्डमा चाहिँ कति खर्च गर्लान् ?
बलिउडका अभिनेताहरूको बडीगार्डको तलब नेपालका प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी छ । वार्षिक २ देखि ४ करोड पारिश्रमिक दिएर राखेका छन्् बलिउड सेलिब्रेटीले आफ्ना अंगरक्षक ।
बलिउडमा बडीगार्डको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले आउने नाम हो— शेरा । उनी सलमान खानका अंगरक्षक हुन् । शेराले दुई दशकदेखि सलमानलाई सुरक्षा दिँदै आएका छन् । शेरालाई आफ्नो परिवारकै सदस्य मान्ने सलमानले उनलाई वार्षिक सवा ३ करोड पारिश्रमिक प्रदान गर्दै आएका छन् ।
अभिनेता आमिर खानलाई युवराज घोरपडेले सुरक्षा दिन्छन् । घोरपडेले अमिरको बडीगार्ड भएबापत वार्षिक सवा ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । बिग बी अभिताभ बच्चनका बडीगार्ड जितेन्द्र सिन्दे हुन् । उनको वार्षिक तलब अढाई करोड छ । शाहरूख खानका अंगरक्षक रवि सिंहले वार्षिक ४ करोड पारिश्रमिक लिन्छन् ।
अक्षय कुमारका बडीगार्ड स्रिसे थलेको वार्षिक पारिश्रमिक २ करोड छ । जलाल अभिनेत्री दीपिका पादुकोणका अंगरक्षक हुन् । रक्षाबन्धनमा दीपिकाले जलाललाई लगाइदिएको राखी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी एकाएक चर्चामा आएका थिए । जलालको वार्षिक पारिश्रमिक सवा करोडजति छ ।
प्रकाशित :आश्विन ६, २०७५